Ukuthunyelwa ezindaweni zokugcina izimpahla ze-Amazon FBA kubhekwa njengokungeniswa kwe-B2B ezweni eliya kulo. Ngabe ufuna ukuthumela i-inventory endaweni yokugcina impahla yase-Amazon ngaphandle kwe-China? Ungazizwa ukhungathekile, umenzi akakaze alungiselele izimpahla ze-FBA, udinga ukuchaza kaninginingi. Ngaphezu kwalokho, ukungenisa kwamanye amazwe kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kuhlala kuyikhanda. Manje silapha ukukusiza. Sinikeza amakhasimende izinsizakalo zokuqoqa abashayeli emadolobheni amakhulu eChina, ukufakwa kophawu lomkhiqizo, imvume yamasiko e-destinatio ...
I-International Express ingenye yengxenye ebaluleke kakhulu yezohwebo zomhlaba wonke. Kwabaningi abathengisi be-eBay / AliExpress / Shopiy ukuhambisa imikhiqizo yabo kunoma yiliphi izwe. Ububanzi obukhulu bezinsizakalo eziphakanyiswe yi-Guangzhou Ontime zikunikeza izinketho eziningi ezahlukahlukene zokuthunyelwa kwempahla yakho yokuthutha. Ngaphandle kokuthuthwa kwempahla yasolwandle nasolwandle, kuye kwasungulwa insizakalo yezokuthutha ebhekiswe ngqo kulokho okulindele nasezidingweni zakho ngokushesha okukhulu. Isevisi yezwi ihlinzeka nge-dea esheshayo nephumelelayo
Ukuthunyelwa Kwezindiza Ezivela eChina - Amanani Amanani Ahamba Phambili E-Air Cargo International Cabanga ndawonye Ukubambisana yigama elisetshenziswe kakhulu, kepha liyahamba lichaze izinsizakalo zethu ezigxile kumakhasimende. Silwela ukuletha okuningi ebuhlotsheni kunendlela elula yokufinyelela kumakhasimende akho emhlabeni jikelele. Ukudluliswa kwempahla yamazwe omhlaba kuvame ukuba isenzo sokulinganisa phakathi kwesikhathi, izindleko kanye nokukhathazeka kwemvelo. Lesi ngesinye sezizathu esenza izinkampani zikhethe i-GZ Ontime ngezindleko ezisebenzisekayo, ezibushelelezi ...
Insizakalo yethu yokukhetha nokupakisha iwasize kanjani amakhasimende? Sinikezela ngezinsizakalo ezigcwele ezenziwe ngezifiso ukuhlangabezana nezidingo zebhizinisi lakho! 99.6% ukukha isilinganiso sokunemba Kuhlanganiswe ngokuphelele newebhusayithi yakho nokuthengisa amapulatifomu Ukulawulwa kwesitoko okuzenzakalelayo kuvuselela insizakalo yosuku olufanayo Ama-oda Ahlanganiswe Ngokweqile Atholiwe Kunezindlela ezimbalwa ongakhetha kuzo mayelana nokuthi siwathola kanjani ama-oda wakho wokucubungula. Inketho ekhethwayo kumakhasimende ethu amaningi ukuvumela ukuhlanganiswa kwe-API kweWarehouse Mana yethu ...
Ukuthuthwa komgwaqo nojantshi KUSUKA ECHINA KUYA EYurophu - Amanani Nesikhathi Sokudlulisa | ISICELO SAMAHHALA | ISINO SHIPPING Rail services With a transit time of 16 to 20 days, ujantshi wezimpahla ushesha kakhulu kunolwandle oluthatha izinsuku ezingama-35 ukufika emachwebeni aseFrance eLe Havre naseFos-Marseille (njengezibonelo). UKUTHUTHWA KWEJAYILI KUKHULA KAKHULU UKUDLULA ULWANDLE OLWANDLE, KODWA USASHESHEKA KUNGAKHATHALALISI UMOYA. Le ndlela yokuhamba ilungele ngokuphelele imikhiqizo yenani eliphezulu efana nezimoto, i-elekthronikhi ...
Nikeza insizakalo yokugcina esebenza kahle, ephephile futhi yamahhala eChina Sinendawo yokugcina impahla engama-3000 + square metres eGuangzhou, Nikeza ukusetshenziswa kwamahhala izinyanga ezintathu kumakhasimende amasha, futhi futhi mahhala ngemuva kwezinyanga ezintathu kuncike ekutheni unayo okungenani ama-60Pcs oda lokuthumela ngenyanga, indawo yokugcina impahla engu-3000m² ingahlangabezana nesidingo sakho esikhulayo sokusungula, ngokushesha icubungule i-oda lakho bese ulungiselela ukuthunyelwa. Indawo yethu yokugcina izimpahla ukugcina isitoko sakho siphephile, sigcwaliswe ngokuqapha kokuphepha okungu-24/7 nomshuwalense. Isinyathelo1: Indawo Yokugcina Amasheya ...
Idlulisela Isevisi ye-FedEx Kusuka eChina iye eFed Ex Ship DHL International Shipping Rates Philippines
Imishini esebenza kahle, abasebenzi abangochwepheshe abathola imali, kanye nezinsizakalo ezingcono emva kokuthengisa; Siphinde siwumndeni omkhulu ohlangene, noma ngubani uhlala nenani lenhlangano "ukuhlanganiswa, ukuzimisela, ukubekezelelana" kwe-Forwarder FedEx Service Kusuka eChina kuye kwiFed Ex Ship DHL International Shipping Rates Philippines, Sizokwenza imizamo emikhulu ezosiza ezifuywayo nezamazwe omhlaba abazoba abathengi, futhi bakhiqize inzuzo ebanjiswene kanye ne-win-win ngokubambisana phakathi kwethu. silinde ngokulangazela ...
Indlela engabizi kakhulu yokuletha amanani amakhulu. Ngokusebenzisa ubudlelwano bethu benkampani yenethiwekhi obuqinile nobesikhathi eside, i-GZ Ontime ikunikeza izixazululo eziguquguqukayo, ezinokwethenjelwa neziphephile zezimpahla zasolwandle. Amakhasimende ayakwazisa ubuchwepheshe bethu ekudluliseni izimpahla olwandle emhlabeni jikelele kunethiwekhi yomhlaba wonke ehlanganisa amazwe nezifunda ezingamashumi amane nesithupha. Bahlonipha ikhono lokuxhumanisa nezinye izinsizakalo ezinjengokudlulisa impahla ezindizeni, ukuthuthwa kwezimoto eziningi, izinsizakalo ezinqamula umngcele, noma ukuthengiselana ngezindlu kwamasiko. Mor ...
Umsizi Wokuthumela Izinzuzo zomthwaloKulabo abafisa ukuba ngosomabhizinisi, iDropshipping iyindlela enhle yebhizinisi ngoba kulula ukuyifinyelela. Ngokuthunyelwa okuqondile, ungavivinya ngokushesha imibono ehlukene yebhizinisi ngamaphutha anqunyelwe, okukuvumela ukuthi ufunde okuningi mayelana nokuthi ungayikhetha futhi uyithengise kanjani imikhiqizo efunwayo. Kunezinye izizathu zokuthi kungani ukulethwa ngqo kuthandwa kangaka. 1. Kudingeka izimali ezincane Mhlawumbe inzuzo enkulu yokuthengisa ngqo ukuthi ungavula isitolo se-e-commerce w ...
Izinsizakalo ezenezelwe Value Sebenzisa amasevisi wethu anezelwe inani ukwakha umkhiqizo wakho! Ukuphakanyiswa komkhiqizo 1. Sicela ungeze okufaka ukumaketha futhi ugcine amakhasimende akho. 2. Phinda ubeke umkhiqizo ebhokisini elenziwe ngendlela oyifisayo ngesitayela sakho osithandayo. 3. Ukufaka nokuhlanganisa kungathuthukisa ukuthengwa kwakho futhi kube lula inqubo yokusabalalisa. 4. Ukulebula kuyinqubo enzima kodwa ebalulekile, ngakho-ke sizokuthathela yona bese sibeka amalebuli ngokufanele ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho iyabonakala. Ukuthengisela Cha ...
Isixazululo Sokuposa Ngeposi Siyaqonda ngempela ukuthi isixazululo seposi sihlale siyindlela yangaphambili yebhizinisi le-e-commerce njengoba lijabulela izinga eliphansi. Ukuze sanelise ukufunwa komthengisi ohlukile, sisebenza ngamahhovisi amaningi eposi eminyakeni edlule futhi siqhubeka nokuqeda insizakalo embi ngezikhathi ezithile. Manje okunye okuhamba phambili. I-China Post China Post ihlukaniswe yaba ngamaphasela angaphezulu namaphasela abhalisiwe. Kuyinsizakalo yomhlaba wamaphasela anesisindo esingaphansi kuka-2KG. I-China Post ne ...
I-DHL FedEX UPS express serviceUkuthumela kwamanye amazwe kusuka eChina kuya e-USA
Lokhu yi-GZ Ontime Logistics, singumenzeli womhlaba wonke nochwepheshe ovunyelwe ngumnyango wezokuhweba kuzwelonke.
Ihhovisi lethu elijwayelekile eliseGuangzhou, i-GZ Ontime ihlose ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni lokuqala kumakhasimende ethu abalulekile emhlabeni jikelele. Amasevisi wethu amboza ku-AMAZON FBA SHIPPING, ukuthuthwa kwempahla yasolwandle, ukuthuthwa kwomoya, ukugcinwa kwempahla, isimemezelo samasiko, ukuthuthwa kwezwe, ukumaketha, ukuthekelisa nokungenisa. Xhumana nathi namuhla! Ithimba lethu elinobungcweti futhi elikwazi ukuphatha yonke imibuzo yakho noma kunini lapho udinga khona.